Otu esi eme ka ihe di elu maka usoro ihe omumu nke ukwu - usoro Makia
Mkpa Ọmịkụkụ Na-eme Ka Ọkpụkpụ Ngwá Agha Dị Elu
Gịnị na-abata n'uche mgbe ị na-ahụ ma ọ bụ nụ okwu ahụ bụ "okpomoku-elu"?
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị na-eche ma ị na-agbachitere ya taa ma ọ bụ na-enweghị mma, ị kwesịrị ịma na ọ bụghị naanị gị. A na-echekarị na okpomọkụ na-agwụ ike, na-abaghị uru, ya mere ndị mmadụ anaghị eme ya. N'ịbụ ndị nwere mmetụta yiri nke a n'oge gara aga, anyị emeela mgbalị pụrụ iche iji mee ka usoro Mgbochi Makia-nkuzi ọkụ, ma ọ bụ usoro nhazi ọgwụ dị ka anyị na-akpọ ya, nke na-adọrọ adọrọ ọbụna ruo onye na-anụ ọkụ n'obi kachasị mma nke ndị mmadụ na-agaghị eleghara ya anya. Ma tupu ị gaa n'ihu, ka anyị leba anya na ajụjụ bụ isi metụtara ọkụ ọkụ Kedu ihe kpatara ime ya?
Were ya na ị na-ehi ụra dịka nwa. Na mberede, ọkụ na-aga n'ihu, onye na-egbukwa ụdị nkwụghachi azụ n'ihu gị iji jupụta ebe ahụ. Ekem, ma n'otu oge ahụ, a gwara gị ka ị kwuo ihe ihu igwe dị na Tuesday, ihe aha nne na nna gị ochie, ma kpebie nke n'ime isii mkpuchi mkpuchi dị iche iche ị dị njikere ịnakwere. Ị ga-enwe ihe niile dị n'okpuru nchịkwa? Otu ihe ahụ na-emetụ n'ahụ gị ma ọ bụrụ na ị na-amanye ya ka ị na-aga n'ihu n'emeghị ka ọ dị ọkụ. A na-akpali ahụ gị na mberede, ọ na-ezipụ ụbụrụ gị ozi, mana ihe niile na-eme na ngwa ngwa. Mkpanye ọ bụla n'ime ahụ gị na - ekwu "Gịnị?" Ugbu a? " Akụkụ nke ahụ gị na-eme ka brakes, akụkụ ọzọ nke panki, na ndị ọzọ fọdụrụ. Ọ bụrụ na enweghi nrụgide na mberede, ma ka na-arụ ọrụ siri ike, ahụ adịghị enwe oge iji mee ka mgbasa gị gbasaa, ihe ga-esi na ya pụta zuru ezu bụ ike ọkụ karịa-nkịtị.
Mee Onwe Gị Elu
N'ezie, okwu nke dị ezigbo mkpa karịa ka ọkụ ọkụ na-akpali. Ụdị ntụrụndụ ziri ezi na-eme ka ozu gị dị njikere ịga. Mkpụrụ sel nwere ike ịkwado nkwekọrịta, ọkpụkpụ ọbara dị irè iji wepụ ihe akwara, ngwongwo nkwado / ejikọta dị njikere maka nrụgide. Oriọna na-enwu, ahụ gị na-amụ anya, ma dị njikere maka ọrụ zuru ezu.
Ọ dị ezigbo mkpa ịkwalite usoro nhụjuanya ahụ, nkwonkwo, na ngwongwo nkwado / njikọta iji mee ka ọ dị njikere. Nke a na-eme ka arụmọrụ na nchekwa dị mma. A kwenyere na isi ihe na-eme ka ọ dị ọkụ bụ iji mee ka akwara ahụ kwụsị iji zere akwara na sprains. N'ezie, ahụike ahụ na-ewepụta uru dị mma karịa nkwonkwo ngwongwo na ngwongwo nkwado / njikọta. Mgbe usoro ụjọ ahụ "na-ehi ụra," ahụ ike gị na-adakarị nhụjuanya, karịsịa n'oge ọzụzụ nke gụnyere mmegharị ngwa ngwa. N'ezie, ịmalite ikpo ọkụ gị dị mkpa iji zere mmerụ na iji hụ na irè ọzụzụ gị. Ọ dị mkpa ka ị gee ntị na ahụ gị nke mere na uru ahụ adịghị "atụ egwu" na "kụrụ nkuchi" tupu ọzụzụ amalitedịrị. A ghaghị ime ka mkpochapu mgbochi mee ihe n'emeghị ihe ọ bụla na mbụ ma ọ bụ naanị mgbe okpomoku dị elu ka enwere ike ịgbatị ya iji tinye ọnọdụ ndị dị oke. Ọcha ahụ dị mma, mana ịmalite ime ihe na-adịghị mma bụ ịṅụ oké mmanya maka mmega ahụ.
Ụzọ Ụzọ Arousal Method Makia
Tupu usoro mmezi nke usoro Makrị amalite, a na-eme ihe na-adọrọ mmasị, ọ na-akwalitekwa ahụ gị maka ịdị njikere maka mmega ahụ n'ezie nke Makia.
Ya mere kedu ihe dị mma banyere Prehab? N'ezie, ihe kachasị mkpa bụ ime ihe mgbaru ọsọ ahụ. Anyị na-ebi n'ụgbọ ndụ anyị na-enwe obi ụtọ, amamihe, na arụ ọrụ nke na-eme ka akụkụ nile nke ahụ gị kpasie ike site n'echiche nke ọzụzụ zuru oke.Otú ọ dị, anyị elepụtakwara anya n'ihu. Prehab anyị na-agụnye akụkụ "ahụike" dị mma nke ọma na azụ na ikpere, nkwo ụkwụ, nkiaka, na akụrụngwa nke na-ewusi ahụ gị ike maka ịdị njikere maka ihe ndị ọzọ na-achọsi ike. Ihe ngwugwu dị mma nke dị mfe ma dị ngwa ịrụ site na isoro vidiyo Source .